Ịzụta uzo bromide Rocuronium (119302-91-9) HPLC≥98% | AASraw
Rocuronium Bromide ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Rocuronium Bromide ntụ ntụ
Rating: SKU: 119302-91-9. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke ntụ ntụ Rocuronium Bromide (119302-91-9), n'okpuru usoro CGMP na sistemụ njikwa njikwa.
AASraw na-enye adịghị ọcha karịa 99% Rocuronium bromide ntụ(CAS 119302-91-9) ka eji na bodybuilders ma ọ bụ labs labs maka… Anyị bụ Rocuronium bromide powder suppliers, Rocuronium bromide powder for sale, ..
Rocuronium bromide uzuzu vidiyo
Rocuronium Bromide ntụ ntụ bụ isi ihe
aha: Rocuronium bromide ntụ
Usoro Molecular: C32H53BrN2O4
Molekụla arọ: 609.68
Alfa: D20 + 18.7 Celsius (c = 1.03 na CHCl3)
Solubility DMSO: Soluble na mmiri, ethanol, DMSO, chloroform, methanol.
agba: White na-acha ọcha uzuzu
Nkọwa ndị ọzọ Na Rocuronium Bromide Powder Help You To Know
Kedu ihe iji Roxuronium Bromide Powder
Rocuronium Bromide Powder bụ ọcha na-acha ọcha na ntụ ntụ dị ka ihe ọhụụ na nchịkọta ọrịa iji kwado ma usoro ngwa ngwa na mmechi mgbatị, na iji nye nkwonkwo nkwonkwo n'oge ịwa ahụ ma ọ bụ mgbatị ventilation. Usoro ọgwụ nke Rocuronium Bromide ndidi. Usoro nchịkọta ọrịa na oge a ga-atụ anya ịwa ahụ, usoro nke ịba aghara na oge a na-atụ anya nke ikuku ventilation, mmekọrịta nwere ike ịmekọrịta na ọgwụ ndị ọzọ na-edozi ahụ, na ọnọdụ nke onye ọrịa kwesịrị iburu n'uche mgbe ị na-achọpụta usoro ahụ .Akwadoro iji usoro nyocha ọhụụ kwesịrị ekwesị maka nyocha nke neuromuscular block na recovery.Inhalational anesthetics na - eme ihe nwere ike imepụta ntanetị nke nchịkwa Rocuronium Bromide .Ndị a nwere ike ịba uru n'oge ọrịa, mgbe ndị na - abatala ihe ndị dị mkpa maka mmekọrịta a. N'ihi ya, a ghaghị ime mgbanwe na Rocuronium Bromide Powder site n'inye obere nkwụzi nkwụsị n'oge obere oge ma ọ bụ site na iji nkwụsị infusion nke Rocuronium Bromide Powder n'oge usoro na-adịte aka (ogologo oge karịa 1 hour) n'okpuru ọrịa nsị (lee mpaghara 4.5). Ndị okenye na-arịa ọrịa ndị na-esonụ nwere ike ịbụ ntụziaka zuru oke maka nkwụsị nke tracheal na izu ike nke anụ ahụ maka mkpirikpi maka usoro ịwa ahụ na-adịru ogologo oge na iji mee ihe na ngalaba nlekọta ahụike.
Kedu ka ị ga - esi mee Rocuronium Bromide Powder
Okenye: Na mbido, 0.45 ruo 0.6 mg / kg IV. Enwere ike iji ọgwụ dị elu nke 1 mg / kg mee ihe maka mkparịta ụka n'oge usoro nsị nke nsị. Mmezi: 150 mcg / kg site na inj (nwere ike belata na 75-100 mcg / kg ma ọ bụrụ na ejiri ọgwụ mgbochi inhalation) ma ọ bụ site na infusion na ọnụego nke 300-600 mcg / kg / hr na n'okpuru anesthesia inhalational infusion rate of 0.3- 0.4 mg / kg / h. Nlekọta na-aga n'ihu na ngọngọ neuromuscular dị mkpa ebe ọ bụ na ọnụọgụ infusion chọrọ dị iche site na onye ọrịa gaa na ndidi yana usoro anestetiiki eji.
Nwa: Infmụaka na umuaka> Nke 1: Na mbido, 600 mcg / kg site na mm. Mmezi: 150 mcg / kg site na inj ma ọ bụ site na infusion na ọnụego nke 300-600 mcg / kg / hr, enwere ike ịchọ doses mmezi karia ndị okenye. Enweghi data zuru ezu iji kwado nkwado ọgwụ maka iji Rocuronium Bromide Powder na ụmụ amụrụ ọhụrụ (ọnwa 0-1) .Ngwaahịa na Rocuronium Bromide Powder na usoro ntinye ngwa ngwa na ndị ọrịa ụmụaka nwere oke. A naghị atụ aro Rocuronium Bromide Powder maka ịkwalite ọnọdụ intubation tracheal n'oge usoro ntinye ngwa ngwa na ndị ọrịa ụmụaka.
Ọrịa: Na ndị ọrịa na-aga na ngalaba Caesarean, a na-atụ aro ka ị jiri ọgwụ 0.6 mg Rocuronium Bromide Powder kwa kilogram, ebe ọ bụ na a chọghị nchọpụta 1.0 mg / kg na onye ọrịa a.
Okenye: Belata nkwụzi ụlọ: 75-100 mcg / kg, na ọnụego infusion akwadoro bụ 0.3-0.4 mg / kg / h (leekwa na-aga n'ihu).
Mgbagwoju anya: Ná mmalite, 600 mcg / kg site na inj. Nlekọta: 75-100 mcg / kg, na ọnụego infusion akwadoro bụ 0.3-0.4 mg / kg / h (leekwa na-aga n'ihu).
Mmetụta ụbụrụ: ma ọ bụ ọrịa biliary tract: Na mbido, 600 mcg / kg site na inj. Nlekọta: 75-100 mcg / kg, na ọnụego infusion akwadoro bụ 0.3-0.4 mg / kg / h (leekwa na-aga n'ihu).
Nnukwu ibu na ibu: Mgbe a na-eji ndị buru oke ibu ma ọ bụ ndị buru oke ibu (akọwapụtara dịka ndị ọrịa na-enwe mmetụta dị ukwuu nke 30% ma ọ bụ karịa karịa ezigbo ahụ ahụ) a ghaghị belata doses iji buru ibu dị arọ.
Ịdọ Aka ná ntị na Rocuronium Bromide Powder
A ghaghị inye onye na-ahụ maka ahụmahụ na-eji Rochuronium Bromide Powder na-eji ya eme ihe na-eme ka ndị mmadụ na-egbochi ya. Enwere ike iji ụlọ ọrụ na ndị na-arụ ọrụ maka nkwarụ njedebe na ikuku ventilary dị ka ndị nwere ike iji ya mee ihe ozugbo.
Ebe ọ bụ na Rocuronium Bromide Powder na-akpata nrịanrịa nke akwara respiratory, nkwado ventilatory dị mkpa maka ndị ọrịa na-agwọ ya na ọgwụ a ruo mgbe a ga-eweghachite ume mmiri zuru oke. Dịka onye ọ bụla na-egbochi ndị mmadụ na-egbochi ya, ọ dị mkpa ịtụle nsogbu nsogbu, karịsịa mgbe e jiri ya mee ihe dị ka usoro nke usoro nhazi ngwa ngwa.
Dị ka ndị ọzọ na-egbochi neuromuscular mgbochi mmadụ, nkwupụta nke neuromuscular mgbochi e kọrọ maka Rocuronium Bromide Powder. Iji gbochie nsogbu ndị na - akpata nkwụsị nke neuromuscular residual, a na - atụ aro ịmịpụta nanị mgbe onye ọrịa ahụ gbakere n'ụzọ zuru ezu site na ngọngọ neuromuscular. Ihe ndị ọzọ nwere ike ime ka mgbochi nkwonkwo neuromuscular ma ọ bụrụ na a gbasasịrị na oge mmechi ahụ (dịka mmekọrịta mmekọrịta ọgwụ ma ọ bụ ọnọdụ ọrịa) kwesịkwara ịtụle. Ọ bụrụ na-ejighị ya dịka akụkụ nke usoro nlekọta ahụike, a ghaghị ịtụle ndị na-agbagha agbagha (dịka sugammadex ma ọ bụ acetylcholinesterase inhibitors), karịsịa na ikpe ndị ahụ ebe ọ ga-eme ka mgbochi neuromuscular fọdụrụ.
Mmeghachi omume anaphylactic nwere ike ime mgbe nchịkwa nke ndị na-egbochi ndị na-egbochi neuromuscular. A ghaghị ilekọta ịkwado ụdị mmeghachi omume ahụ mgbe niile. N'ihe banyere mmeghachi omume anaphylactic gara aga na ndị mmadụ na-egbochi ndị mmadụ na-egbochi ya, a ghaghị iji nlezianya pụrụ iche ebe ọ bụ na a kọọrọ ndị na-arịa ọrịa neuromuscular na-emeghachi omume.
Rocuronium Bromide Powder nwere ike ime ka ọnụọgụgụ obi.
N'ikpeazụ, na-esote ndị na-egbochi neuromuscular blocking agents na ICU oge dị ogologo, enweghi nkwarụ ogologo na / ma ọ bụ nkwarụ akwara skeletal. Iji nyere aka gbochie nkwụsị nke ọhụụ na nhụjuanya neuromuscular na a na-atụ aro ya na a na-enyocha mmechi neuromuscular n'oge nile nke ndị mmadụ na-egbochi neuromuscular blocking agents. Tụkwasị na nke a, ndị ọrịa kwesịrị ịnata analgesia na sedation. Ọzọkwa, ndị mmadụ na-egbochi na-egbochi ndị na-egbochi neuromuscular iji mee ka ndị ọrịa ahụ ma ọ bụ n'okpuru nlekọta nke ndị dọkịta nwere ahụmahụ maara ihe ha na-eme nakwa usoro usoro nlekota oru dị mma.
Myopathy mgbe ogologo oge nlekọta nke ndị ọzọ na-abụghị depolarising neuromuscular mmadụ igbochi na ICU na-ejikọta na corticosteroid ọgwụ na-akọ mgbe nile. Ya mere, maka ndị ọrịa na-anata ndị mmadụ na-egbochi ndị mmadụ na-egbochi ha na-egbochi ha na-egbochi ya, ha ga-ejedebe oge ọ bụla o kwere mee.
Ọ bụrụ na a na-eji suxamethonium mee ihe maka mbubata, a ga-egbu oge nchịkwa nke Rocuronium Bromide Powder ruo mgbe onye ọrịa ahụ natara site na nchịkwa neuromuscular site na suxamethonium.
Otu esi zụta Rocuronium bromide ntụ ntụ si AASraw